प्रदेश २ का एक्ला क्यान्सररोग विशेषज्ञ – Health Post Nepal
२०७५ भदौ ६ गते ११:४०
जनकपुर बजारमा रहेको ठूलो आयुर्वेद औषधि पसलमा कुनै स्वास्थ्यचौकीमा जस्तै भिड लाग्थ्यो । घाउखटिराको सामान्य डे«सिङलगायत अन्य प्राथमिक उपचार त्यहीँ हुन्थ्यो । किशोरावस्थामै अब्देशकुमार साहले त्यस्ता घाउखटिरा सफा गरिदिन्थे । त्यही समयमा त्यो किशोर मनले प्रण गरिसकेको थियो– भविष्यमा डाक्टर बन्नुपर्छ ।
बाबुबाजेको औषधि व्यापार जनकपुरमा जमेकै थियो । व्यापारी पृष्ठभूमि भएपछि खासै अभाव नभोगी अब्देशले जनकपुरबाट विद्यालय शिक्षा पास गरे, छात्रावासमै बसेर । छात्रावासको जीवन, धेरै अनुशासन, छिटपुट स्वतन्त्रता । बाल्यकालका विशिष्ट स्मृतिहरू छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । तर, थाहै नपाईकनै अब्देशमा एउटा भावना विकास भएछ, जीवनभर सकेसम्म जनकपुरमै बस्नुपर्छ ।
तर, डाक्टरी पढ्न त गाउँ छोड्नै पथ्र्यो । २०५० सालमा प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास गरेपछि प्लस टुसमेत उनले गाउँमै पढे । उच्च शिक्षातर्फ विज्ञान विषयमा जिल्ला टप भएपछि उनलाई चिकित्सा विज्ञानतर्फको रुचिले उद्घाटित हुने अवसर मिल्यो । उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा पास गरेर जोटपाटी नेपाल मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस पढे । आफ्नै मूल्यांकनमा उनी आफूलाई अब्बलभन्दा औसत नै विद्यार्थी ठान्छन् । एमबिबिएसपछि केही वर्ष काम नगरी पिजी पढ्न पाइँदैनथ्यो । उनले एमबिबिएसपछिको अनुभवका लागि छोटो अवधिमा धेरैतिर चहारेर काम गरे । हिमालदेखि तराईसम्म चहारे तर पेरिफेरी छोडेनन् । उनी उपत्यकामा अडिएनन् ।
उनले उदयपुरको कटारी, दोलखा, मिर्चैया, जलेश्वरसम्म पुगेर छोटो–छोटो अवधि काम गरे । उनले सधैँ निजी अस्पतालमै काम गरे । अनुभव पुगेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पिजीतर्फ छात्रवृत्ति खुलायो । उनले दरखास्त हाले । ७ नम्बरमा नाम निस्कियो, अंकोलोजी (क्यान्सर विशेषज्ञ) पढ्न चीनको ओहायो विश्वविद्यालयमा अवसर मिल्यो ।
चीन गएर १ वर्ष भाषा पढे । भाषा पढेर बल्ल तालिम सुरु भएकाले बिरामी र प्राध्यापकसँग समेत राम्रो संवाद हुन पायो, जसका कारण शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी भयो । उनी चीन गएको चौथो वर्ष सन् २०१२ मा नेपाल फर्के । छात्रवृत्तिमा पढेर फर्किएपछि २ वर्षे छात्रवृत्ति करार सेवा गर्नै पथ्र्यो । त्यतिवेला सरकारीतर्फ अंकोलोजिस्टको दरबन्दी वा छात्रवृत्ति करार खटाउने ठाउँ वीर अस्पताल मात्रै थियो । तर, उनले वीर जान्नँ, जनकपुर पठाइदेऊ भने । उनले स्वास्थ्य अधिकारीलाई बारम्बार आग्रह गरे, ‘मलाई काठमाडौं होइन, बाहिर जाने रहर छ ।’ उनलाई जनकपुर अस्पताल नै खटाइयो । अढाई वर्ष उनले जनकपुर अस्पतालमा छात्रवृत्ति सेवा करार गरे ।
प्रत्येक दिन २ घण्टा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सेवा दिन्छन्, निःशुल्क । आफ्नै निजी अस्पताल भएको डाक्टर, सरकारीमा किन निःशुल्क सेवा दिन्छ ? कतै बिरामी रेफर लिन त हैन ? कतिपय अवस्थामा यस्तो प्रश्न पनि उठ्छ । साह भन्छन्, ‘म अञ्चल अस्पतालमा सेवा उपलब्ध भएको केस निजीमा छ भन्दिनँ ।
जनकपुरमा त्यतिवेलासम्म कुनै पूर्वाधार थिएन । एउटै विश्वविद्यालय पढेका साथीहरूको सहयोग र समन्वयबाट उनले जनरल सर्जरी सेवा सुरु गरे । उनी अंकोलोजी पढेर आए पनि सुरुसुरुमा यसबारे धेरै कमलाई मात्र थाहा थियो ? एपेन्डिटेक्टोमीबाट सुरु भएको शल्यक्रिया बिस्तारै फैलिँदै गयो । उनी क्यान्सरको डाक्टर भनेर चिनिँदै गए ।
करार सकिएपछि उनले आफैँ अस्पताल खोल्ने योजना बनाए, फलस्वरुप ३ वर्षअघि सुरु भयो २५ बेडको नवजीवन जनरल अस्पताल । अहिले त्यो अस्पतालमा स्त्री तथा प्रसूति, अर्थो, अंकोलोजी, मिसिडिनलगायतका विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छन् ।
क्यान्सरका बिरामी बिस्तारै आउन थाले । सुरुमा डा. अब्देशलाई कम्तीमा परीक्षण गरेर रोगको निदानसम्म गरिदिनसके यहाँ हुन नसक्ने उपचारका लािग सम्बन्धित ठाउँमा पठाइदिन सकिन्थ्यो भन्ने लाग्यो । केमो चाहिने, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने वा रेडिएसन नै चाहिने हो, कम्तीमा त्यसको यकिन जनकपुरमै हुन थाल्यो ।
अहिले पनि उनी काठमाडौंबाट २ जना, भरतपुरबाट एकजना केमोका विशेषज्ञ जनकपुर झिकाउँछन् । रेडिएसन चाहिने बिरामीलाई भरतपुर वा काठमाडौं पठाउँछन् । गर्न सकिने शल्यक्रिया जनकपुरमै हुन्छ र कम्तीमा सरकारले दिने एक लाखको उपचार सहुलियत सिफारिस हुन्छ ।
आफ्नो उपस्थितिले ठूलो परिवर्तन देखाउन नसकेपछि नफैलिनेखालका क्यान्सर हुँदा पनि जीवनका अन्तिम दिन आइहाल्यो भन्दै डराउनेहरूले कम्तीमा यस्तो क्यान्सरसँग डराउन पर्दैन भन्ने थाहा पाउन थालेका छन् । कम्तीमा जनकपुरमै क्यान्सर हो÷हैन भनिदिन सक्दा मात्रै पनि धेरैलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट जोगाउन सकिएको छ ।
न पर्याप्त पूर्वाधार, न सहयोगी जनशक्ति, अब्देशलाई कहिलेकाहीँ त लाग्छ– किन सुविधासम्पन्न ठाउँमा गएर धेरै बिरामीलाई सेवा नदिने ? तर, अन्तर्मनले भन्छ, ‘तँ यहाँ छस् र धेरैको भरोसा छ । यहाँ कसले गरिदिने ? कसै न कसैले त गर्नुप¥यो नि,’ डा. साह भन्छन् ।
उनी कहिल्यै सरकारी अस्पतालमा जागिर खान गएनन्, काठमाडौं बसेनन् । तर, सरकारी अस्पतालमा उनी सेवा दिइरहेका छन् । उनी प्रत्येक दिन २ घण्टा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सेवा दिन्छन्, निःशुल्क । आफ्नै निजी अस्पताल भएको डाक्टर, सरकारीमा किन निःशुल्क सेवा दिन्छ ? कतै बिरामी रेफर लिन त हैन ? कतिपय अवस्थामा यस्तो प्रश्न पनि उठ्छ । साह भन्छन्, ‘म अञ्चल अस्पतालमा सेवा उपलब्ध भएको केस निजीमा छ भन्दिनँ । निजीमा लानै परे पनि अञ्चल अस्पतालमा कति दर रहेछ बुझेर आऊ, त्यतिकै उपचार गर्दिन्छु भन्ने गरेको छु ।’
उनी कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सीमा पनि जानुपर्छ । बोलाइदिन्छन्, नजान भएन । अञ्चल अस्पतालमा अर्का एकजना सर्जन छन् । गम्भीर केस इमर्जेन्सीमा आउँदा वा राति पनि सारोगारो पर्दा अब्देशलाई सम्झन्छन्, उनी जागिरे नै जसरी सहयोग गरिदिन पुग्छन् ।
यस अवधिमा उनले थाइल्यान्डबाट ३ महिने ट्रमासम्बन्धी फेलोसिप तालिमसमेत गरे । जनकपुर अस्पतालमा अर्थोपेक्डिक र जनरल सर्जनको दरबन्दी भए पनि रिक्त छ । प्रदेश २ मा मत्रै होइन, देशभर सडक दुर्घटना बढेको छ । ‘ज्यानै जाने अवस्था भएकाहरूलाई त बचाउन सक्ने जटिल शल्यक्रिया गर्न टिम छैन, कम्तीमा हातखुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन भने थुप्रै काम गरेका छौँ,’ अब्देश सन्तुष्टि पोख्छन् ।
उनको विशेषज्ञताले उनी विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर क्यान्सर चेतना फैलाउन पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । प्रदेश २ मा मुखको क्यान्सर प्रमुख समस्या हो । पान, सुपारीदेखि पराग गुट्खाजस्ता पदार्थको सेवन क्यान्सरको प्रमुख कारण हो । त्यसबाहेक पुरुषमा ग्यास्टेइन्टेस्टाइन र महिलामा ब्रेस्टको क्यान्सर यो प्रदेशमा बढी भेटिने गरेको छ ।
साहलाई प्रदेश २ मा छुट्टै क्यान्सर अस्पताल होस् र आफू त्यहीँ आबद्ध हुन पाइयोस् भन्ने इच्छा छ । कम्तीमा प्रदेश २ वासीले उपचारका नाममा भौँतारिएर हिँड्नुनपरोस् । क्यान्सर उपचारमा सबैभन्दा बढी खर्च रोगको निदान र औषधिमा हुन्छ । सरकारले औषधि सस्तो बनाइदिने र निदानका उपकरणहरू उपलब्ध गराइदिने हो भने धेरैलाई राहत दिन सकिने र समयमै क्यान्सर पत्ता लगाएर ज्यानै पनि बचाउन सकिने उनी बताउँछन् ।
प्रदेश २ मा समग्र स्वास्थ्य अवस्था नै नाजुक छ । भएको एउटा मेडिकल कलेज कहिले चल्छ त कहिले बन्द हुन्छ । विशेषज्ञको उपस्थिति उस्तै छ । अञ्चल अस्पतालमा सिटी स्क्यान त छ, प्याथोलोस्टि छैनन् । बाहिरबाट प्याथोलोजिस्ट झिकाएर सेवा दिँदा जनतालाई महँगो परेको छ । तर, पनि महोत्तरी, सर्लाही, सिरहादेखि सिन्धुलीसमेतबाट उनलाई खोज्दै बिरामी आउँछन् । एक्लो डाक्टरले विनाटिम उपचारभन्दा पनि भरोसा न दिन सक्ने हो ! त्यो भरोसा उनले दिएका छन् । हाल नेपालमा रहेका क्यान्सर विशेषज्ञमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनकपुरमै जन्मिएका, पढेका छन् । तर, ती कोही पनि जनकपुरमा छैनन् । उनी जनकपुर मात्रै होइन, प्रदेश २ कै एक्ला क्यान्सर विशेषज्ञ हुन् । उनलाई काठमाडौं र सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा होइन, तर मोह पनि छैन ।
डा. साहका अनुसार अहिले नेपालमा तीन ठाउँमा नयाँ क्यान्सर अस्पताल बन्दै छ, जसमा जनकपुर पनि प्राथमिकतामा परेको छ । भारतीय दूतावासको सहयोगमा एउटा क्यान्सर अस्पताल प्रदेश २ मा ल्याउन त्यहाँका डाक्टरहरू मरिमेटेर लागेका छन् ।
स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा अन्य आनीबानीका हिसाबले पनि प्रदेश जोखिमपूर्ण रहेकाले एउटा क्यान्सर अस्पताल बन्नु जरुरी भएको उनी ठान्छन् ।
यसै पनि सिंगो प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निकै नाजुक छ । ट्रसरी लेबलको उपचार हुनुपर्ने अञ्चल अस्पतालमा आधारभूत जत्तिको मात्र सेवा छ । त्यति धेरै विशेषज्ञ दरबन्दी भए पनि दरबन्दीअनुसार कहिल्यै विशेषज्ञ पूर्ति भएनन् । क्यान्सरसँगै बढ्दो सडक दुर्घटनाको उपचारमा पनि डा. साहले जनकपुरमा महत्वपूर्ण सेवा पु¥याएका छन् ।
अञ्चल अस्पतालमा धेरै विशेषज्ञ अर्थो र सर्जनको समेत दरबन्दी भए पनि लामो सयमदेखि रिक्त छन् । ३ वर्षअघिको एउटा घटनाले अहिले पनि उनको मन कँुडिन्छ । मध्यदिनमा २३ वर्षीय एक युवा गम्भीरखालको सडक दुर्घटनामा परे । जानकी मेडिकल कलेजमा उपचार नभएपछि रेफर ग¥यो । कम्मरनेर गम्भीरखालको समस्या (पेल्भिक फ्याक्टर) थियो । अनेक प्रयास गर्दा पनि रगत रोक्न सकिएन । जनकपुरमा एउटै एनेस्थेसियोलोजिस्ट थिएन । कम्तीमा बेहोस गराउने डाक्टर भएको भए उनी प्रयाससम्म भए नि गर्न सक्थे । आँखैअगाडि उनको ज्यान गयो । कहिले उपकरण त कहिले विशेषज्ञ नहुँदा स्थानीय तहमै बचाउन सकिने ज्यान गइरहेका छन् ।
अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी दिने तर डाक्टर नपठाउने, यसमा राज्य दोषी छ । अर्कोतिर नेपालमै सबैभन्दा बढी डाक्टर स्थायी घरका आधारमा धनुषाबाटै बढी छन् । तर, धनुषामा जन्मेर, पढेर पनि थुप्रै डाक्टरको कर्मथलो धनुषा छैन । ‘राज्यको विभेद त होला, हाम्रो पनि त जन्मस्थान प्राथमिकतामा पर्नुप¥यो नि !’ उनी थप्छन् ।
संसारभर कति एड्भान्स प्रविधि आइरहेका छन् । तर, नेपालमा यति महत्वपूर्ण सहरमा सामान्य उपकरणसमेत नहुँदा नागरिकको ज्यान गइरहेको प्रति साहलाई दुःख लाग्छ । केही समयअघि उनी अहमदाबादको एउटा सम्मेलनमा गएका थिए । ‘अर्थोसर्जरीमा मेघा प्रस्थेसिस (कुनै ठाउँको हड्डी निकालेर स्टिल प्रत्यारोपण गर्ने) प्रविधि प्रचलनमा छ, हामी इम्पुटेसन (हातखुट्टा काटेर फल्ने प्रविधि)मै छौँ,’ उनी भन्छन् ।
यस्ता कुराले उनलाई कहिलेकाहीँ हीनताबोध गराउँछ । उनलाई पनि आधुनिक प्रविधिसित अपटुडेट हुन मन लाग्छ ।
6 thoughts on “प्रदेश २ का एक्ला क्यान्सररोग विशेषज्ञ”
dr saab anesthesiologist vayera k garnu birami lai kehi vayo vane maari halchhan. ek choti jhapa ma liver injury vayera internal bleeding vayera pet kholnu parne vayo. tara birami lai guarantee chahiyo re. tyaspachhi biratnagar lagyo tyaha liyenan ani bata ma india tira jada jadai birami expired. aba tyo birami operation try garda gardai mareko vaye hamro k haal hunthyo hola. birami lai tyo dr le naheri marda chahi acceptable tara try garda gardai maryo vane unacceptable k hoyesto
dr saab anesthesiologist vayera k garnu birami lai kehi vayo vane maari halchhan. ek choti jhapa ma liver injury vayera internal bleeding vayera pet kholnu parne vayo. tara birami lai guarantee chahiyo re. tyaspachhi biratnagar lagyo tyaha liyenan ani bata ma india tira jada jadai birami expired. aba tyo birami operation try garda gardai mareko vaye hamro k haal hunthyo hola. birami lai tyo dr le naheri marda chahi acceptable tara try garda gardai maryo vane unacceptable k hoyesto. specialist pathayera kehi hunewala chhaina
web log! http://keegankyncp.tribunablog.com
subjects you write in relation to here. Again, awesome web log! http://keegankyncp.tribunablog.com
I know this weeb site presents quality dependent articles or reviews and other stuff, is there any